Muxuu salka ku hayaa safarka Ra'iisul Wasaaraha ku tagay Addis Ababa ? - Jowhar Somali Leader
Home Somali Muxuu salka ku hayaa safarka Ra’iisul Wasaaraha ku tagay Addis Ababa ?
Muxuu salka ku hayaa safarka Ra’iisul Wasaaraha ku tagay Addis Ababa ?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa safar aan horay loo sii shaacin maanta ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo safarkiisa ku soo aaday xilli xasaasi ah Caalamka uu faro ba’an ku haayo cudurka Coronavirus, dalalka adduunka qaar ka mid ahna uu joojiyay duulimaadyada iyo isu imaanshaha dadka.
Ilo wareedyo muhiim oo ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in safarka Ra’iisul Wasaaraha ee Addis Ababa uu la xiriiro xaalad ku soo korortay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Wararka ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu farriin ka sido Madaxweyne Farmaajo, isagoo u gudbin doona Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana farriinta la xiriirtaa xiriirka labada dal iyo iskaashiga.
Itoobiya ayaa dhowaan ka carootay markii Soomaaliya taageertay qaraarkii Masar ee Jaamacadda Carabta ee ku aadanaa mowqifkeeda la xiriira biyo xireenka ay dhisatay Itoobiya, iyadoo shirkii Jaamacadda Carabta uu Soomaaliya u matalayay Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
Masar ayaa wada galaan gal xooggan oo ay kaga soo horjeedo qorshaha Itoobiya dooneyso inay albaabada ugu furto biyo xireenka Wabiga Nile, taasoo ay Masar ku hanjabtay inay dagaal ka xigto.
Dalalka Geeska Afrika ayaa u muuqda kuwo lakala saftay labada dal ee Itoobiya iyo Masar, iyadoo khilaafkooda meel xun gaaray, waxaana Masar taageero u muujiyay Soomaaliya, iyo Kenya oo Madaxweyne Uhuru uu Talaadada shalay khadka taleefanka kula xiriiray Madaxweynaha Masar Abdelfatah Al Sisi, sida uu u xaqiijiyay Afhayeenka Al Sisi. Sidoo kale dowladda Sudan ayaa taageertay Itoobiya, halka Eritrea la sheegay inay ka fikireyso inay Masar siiso Saldhig Milateri.
Loolanka Juquraafi Siyaasadeedka ee Gobolka Geeska Afrika iyo dalalka kulaala Badda Cas ayaa sanadihii u dambeeyay waxaa uu ahaa mid isa soo tarayay, arrimaha ugu weyn ee muranka Wabiga Nile qeyb weyn ayuu ka ahaa.